Beta-ka cusub ee watchOS 6 wuxuu kuu ogolaanayaa in laga takhaluso qaar ka mid ah barnaamijyada hooyo | Wararka IPhone
Qalabka cusub ee watchOS 6 beta wuxuu oggol yahay ka saarista qaar ka mid ah barnaamijyada hooyo
Markii aan bilowno qalab markii ugu horeysay way badan yihiin barnaamijyada hooyo lagu rakibay sidii caadiga ahayd. Mararka qaarkood xitaa aad u tiro badan oo nagu hareeya buuxinta bogga oo dhan ee loo yaqaan 'Springboard'. Dhowr sano ka hor, Apple way oggolaatay awoodda looga saari karo barnaamijyadan, iyadoo ay suuragal tahay in dib loo rakibo iyadoo la adeegsanayo App Store.
Isla wax uun baa ku dhacay daawashada 6. Beta-kii saddexaad ee loogu talagalay soosaarayaasha nidaamka cusub ee hawlgalka ee smartwatch-ka Apple ayaa shalay la bilaabay. Mid ka mid ah waxyaabaha cusub ee beta tani waa inaan karno ka saar barnaamijyadooda hooyo qaarkood ee ka tirsan Apple Watch. Waqtigan xaadirka ah, wixii aan soo aragnay, maahan in barnaamijyada oo dhan laga saari karo, kaliya qaar baa la jaan qaadaya shaqadan.
Waad tirtiri kartaa barnaamijyada aadan ku isticmaalin watchOS 6
Codsiyada aan ku hayno heerka caadiga ah ee ku saabsan Apple Watch-keena aad ayey u badan yihiin lagamana yaabo inaad furtay midkood tan iyo maalintii aad saacadda iibsatay. Waxa kaliya ee barnaamijyadan ay qabtaan ayaa ah inay boos kahelaan boodhkaaga oo ay dareenkaaga ka weeciyaan barnaamijyada aad runti isticmaasho runtiina ay muhiim yihiin. Taasi waa sababta Apple ay u oggolaatay dadka isticmaala ka saar barnaamijyada gaarka ah ee daawada ee watchOS 3 beta 6.
Waqtigan xaadirka ah kuwan kaliya ayaa ah barnaamijyada aan tirtiri karno: Kameradda Remote Remote, Noise, Timer, Stopwatch, Alarms, Breathe, Walkie-Talkie, Control Cycle caadada, ECG, Remote, Now ringing and Radio. Kuwani waa barnaamijyada kaliya ee aan hadda tirtiri karno. Si kastaba ha noqotee, waxaan aaminsanahay in mustaqbalka Apple ay kuu oggolaan doonto inaad tirtirto dhammaan codsiyada maxaa yeelay waa inaad xusuusataa taas dambe dib ayaan uga soo dejin karnaa App Store.
Habka looga saaro codsiyada waa mid aad u fudud: sida iDevices-ka. Waxaan soo galeynaa Guga loo yaqaan 'Apple Watch' adigoo riixaya 'Digital Crown' oo waxaan ku riixeynaa dhowr ilbiriqsi wixii codsi ah iskutallaabtuna waxay ka muuqan doontaa bidix sare ee barnaamijyada la jaan qaadaya shaqadan. Waxaan ku riixnaa iskutallaabta waana intaas. Codsi la tirtiray
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Qalabka cusub ee watchOS 6 beta wuxuu oggol yahay ka saarista qaar ka mid ah barnaamijyada hooyo
Maxaad ka ogtahay casrigaaga? Sahanku wuxuu muujinayaa dadka isticmaala macruufka
WatchOS 6 Developer Beta XNUMX Hada Waa Laheli Karaa